Lovelace – Link 1 | MM Movie Store
ဒရာမာ ကား ကောင်းကောင်းလေး တစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပြီဗျို့။ ဇာတ်လမ်းလေးက ညစ်ညမ်း ဗွီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေး တစ်ခုရဲ့ အလွဲသုံးစား မှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ ဒီကားလေး ကြည့်ပြီးရင် မိတ်ဆွေတို့လည်း အပြာမယ် တွေရဲ့ ဘဝကို ကိုယ်ချင်းစာ သနား စိတ်တွေ အနည်းနဲ့အများ ဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။
1970 လောက်ကပေါ့ဗျာ…..Linda Boreman ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဟာ သူ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့အတူ သံစုံတီးဝိုင်း တွေမှာ အပျေ်ာတမ်းအကမယ် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာ Chuck Traynorဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ Lindaကို စိတ်ဝင်စားပြီး ချဉ်းကပ်လာပါတော့တယ်။ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြတယ် ဆိုပါတော့။ တစ်နေ့တော့ အိမ်နဲ့ပြဿ နာဖြစ်တဲ့ Lindaဟာ မိဘရင်ကို ခြေစုံကန်ပြီး Traynorနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားပါလေရော။အဲ့မှာတင် Linda ဟာ Traynorရဲ့ homemade ညစ်ညမ်း ကားတွေကို စတင် ကြည့်ရှုဖြစ်လာပါတော့တယ်။
၆လလောက်အကြာ မှာTrayorတစ်ယောက် ထောင်ကျမလိုဖြစ်ပါလေရော။မကောင်းတဲ့မိန်းမတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်းကပေါ့။Linda ပဲ အာမခံ ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ မရပ်သေးတဲ့ ကိုယ်တော်ချောက Linda ကို ညစ်ညမ်းကားတွေ အပျော် ရိုက်ကြည့်ဖို့ ဆွဲဆောင်လာပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ သက်မွေးဝမ်းကြောင်း မှု အဖြစ် ရပ်တည်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ ညစ်ညမ်း ရုပ်ရှင်လောကမှာ Linda Lovelace ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံး ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ Linda Lovelave စတင် ရိုက်ကူးတဲ့Deep throatအမည်ရ ညစ်ညမ်းကားဟာ တဟုန်ထိုးနာမည်ရပြီး ထုတ်လုပ်သူတွေလည်း အမြတ်အစွန်းတော်တော်ရလိုက်ပါတယ်။
လူတွေကလည်း Lindaကို မျက်စိကျလာပြီး ညစ်ညမ်းမင်းသမီး လောကမှာ ဘုရင်မဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုပြီး သတ်မှတ်လာကြပါတယ်။နောက်တစ်ကားက gang bang ပါ။ gang bangဆို သိကြရော့ပေါ့နော့။ အိမ်ထောင်လဲကွဲ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်လောကကို စိတ်ကုန် လာတဲ့ Lindaတစ်ယောက် ဘယ်လိုရုန်းထွက်နိုင်ပါ့မလဲ? ငွေကလည်း ထုတ်လုပ်သူတွေသာ ရပြီး Lindaအတွက် မဆိုစလောက်လေးသာ ရပါတယ်။ လိင်အကြမ်းဖက်မှုတွေ ခံရလည်း သရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ တရားစွဲလို့မရ။ ကဲ Linda ဘဝ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ……………. ဒီကားလေးဟာ အပျော်မယ်တွေရဲ့ဘဝကို မီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပြီး 18+ပေမယ့် အရမ်းကြမ်းတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ မပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အချစ်နဲ့ ရမ္မက် ကိုလည်း ကွဲကွဲပြားပြား ဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။
Three Women – Link 1
Three Women – Link 2
The World’s End End (2013)